တို​တို​ထွာ​ထွာ​အ​ဖြေ​များ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ရာ​ဇာ​ဘွား: driver.genius.pro. ​ဆို​တာ ​ကြား​ဘူး​တယ်.​အ​သုံး​ပြု​ပုံ​လေး​နဲ့ ​ဖိုင်​လေး​တင်​ပေး​ပါ​လား​ခင်​ဗျာ..
​ညီ​ရေ ​ဒီ​မှာ ​အစ်​ကို​ရေး​ထား​ပါ​တယ် . ​ဖိုင်​ပါ​တင်​ထား​ပါ​တယ် . ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ .
Tay September 23, 2009 at 9:55 AM
​မ​အား​လပ်​တဲ့​ကြား​က ​အ​ခု​လို​အ​ချိန်​ပေး​တဲ့​အ​တွက် ​အ​များ​ကြီး​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်​ညီ​အစ်​ကို...
down ​ကြည့်​ပြီး ​သုံး​ကြည့်​တယ် backup ​လုပ်​ထား​တာ​ကို window ​ပြန်​တင်​ပြီး driver ​ပြန်​ထည့်​ကြည့်​တာ ​မ​ရောက်​ဘဲ​ဖြစ်​နေ​တယ်... ​ကျွန်​တော်​သိပ်​မ​သိ​တာ​လည်း​ပါ​တယ်.. ​အ​ချိန်​လေး ​နည်း​နည်း​ပို​ရင် ​လမ်း​ညွှန်​ပေး​ပါ​အုံး...​ညီ​အစ်​ကို..
​ကျွန်​တော်​ကွန်​ပျူ​တာ​မူ​ရင်း​က fujitsu vista Home premium ​ပြန်​တင်​တာ​က ​ရှိ​တဲ့ dvd ​က vista ultimate version ... ​အဲ့​ဒါ​တွေ ​ကွာ​ခြား​မှု​ကြောင့်​လား... 32 bit , 64 bit ​ကွာ​ခြား​မှု​ကြောင့်​လား... ​သိပ်​မ​သိ​တော့ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ဖြစ်​နေ​တယ်... ​အ​လား​တူ ​ကျွန်​တော် ​သူ​ငယ်​ချင်း​စက်​က fujitsu​ဘဲ ​သူ​က netcontroller ​ကို windows ​တင်​တာ​မှာ ​သိ​တော့ ​သုံး​လို့​ရ​ပေ​မယ့် ​မြန်​မာ​စာ ​ပေါ်​ဖို့ ​ကြိုး​စား​တာ ​ဖတ်​လို့​ဘဲ​ရ​တယ်.. task bar ​မှာ icon ​တက်​လာ​တဲ့​အ​ထိ​မ​ရ​ဘူး... ​ရေး​လို့​မ​ရ​ဘူး.. net ​မှာ​ညွှန်​ပြ​ထား​တဲ့ ​နည်း​လမ်း​လည်း​စုံ​နေ​ပြီ။ ​မ​ရ​ဘူး... ​ဒီ​မှာ windows version ​ပြောင်း​တာ​တွေ ​အ​ခက်​အ​ခဲ​ရှိ​တယ်.. ​ညီ​အစ်​ကို.. ​အဲ့​ဒါ ​အ​ဆင်​ပြေ​တဲ့​အ​ချိန်​လေး ​ညွှန်​ပြ​ပေး​ပါ​ခင်​ဗျာ.. ​ကျေး​ဇူး​အ​ထူး​တင်​စွာ​ဖြင့်......